Izinto ezintlanu ekufuneka uzenzile yonke imihla ukuze ube sempilweni | IBezzia
Susana Garcia | 06/04/2021 20:00 | Iingcebiso zezempilo, ZeMpilo
Ukuba sempilweni ngamanye amaxesha kungumcimbi wethamsanqa, kuba iigene zinento yokwenza nayo, kodwa ikwanento yokwenza nendlela esiphila ngayo nayo yonke into esiyenzayo. Isimbo ngasinye kunye nomkhwa ngamnye uchaphazela umzimba wethu kwaye uphela usichaphazela, kwixesha elifutshane okanye elide, ke kufuneka sikhumbule ukuba kufuneka senze ezinye izinto ukuze sibe sempilweni kwaye siphile ubomi obunempilo obusivumela ukuba sifikelele ebudaleni indlela yokuphila elungileyo.
Sobona Izinto ezintlanu ekufuneka uzenzile yonke imihla ukuze ube sempilweni kwixesha elide. Olu lugqatso lomgama omde kwaye izijekulo ezikhulu ezisusela kusuku olunye ukuya kolandelayo zenza uzive ungcono akunamsebenzi. Ngokuqinisekileyo kufuneka wenze izinto ukuze ube nobomi obusempilweni. Ezi ntlobo zezinto ziyinxalenye yendlela ophila ngayo kwaye zizimbo zomzimba zemihla ngemihla ezikuvumela ukuba uzikhathalele.
1 Ukuphumla ngokuphumla
2 Isondlo esifanelekileyo
3 Yenza imidlalo yonke imihla
4 Sela amanzi
5 Thintela uxinzelelo
Ukufumana kwakhona imihla ngemihla kwaye ube nobomi obunempilo, kubalulekile ukuba uphumle ukuze umzimba nengqondo ziphinde zibuye. Oku kuqinisekisiwe ukuba ukuba asilali kakuhle sidiniwe ngakumbi, Ukugxininiswa kunye noxinzelelo. Ke ayisiyokulala iiyure ezithile kuphela, kodwa okusalayo kukumgangatho. Zama ukuba yonke into esegumbini ikulungele ukuphumla. Gwema izikrini kwaye ungafaki umabonwakude, kuba oku kubangela ukuba ungalali kakuhle. Gcina imali kumatrasi olungileyo okunceda uphumle kwaye uthathe ingqalelo lobushushu begumbi. Ungazinceda ngezinye izinto ezinje ngevumba elimnandi okanye izandi ezikunceda uphumle. Ukulungiselela indawo kubalulekile, nangona kuya kufuneka uphephe izidlo ezinkulu kunye nokuzilolonga ngexesha lokulala, njengoko kuyakwenza ukuba usebenze. Ukuba ngayo yonke le nto awukwazi ukulala kakuhle, kunokuba yimfuneko ukudibana nengcali.
Sonke siyazi ukuba yintoni ukutya okunokulinganisela. Kuya kufuneka uthathe iziqhamo kunye nemifuno yonke imihla, ukongeza ekuthinteleni ukutya okucutshungulweyo, kuba zezona zinobungozi. Ukuba ufuna ukugqitha, kufanele kube ngexesha kwaye hayi yonke imihla. Ngosuku nosuku kuya kufuneka utye ukukhanya kunye nokutya okungafaniyo kuthintela ityuwa egqithisileyo, amanqatha okanye iswekile. Ukuba ufunda ukonwabela ukutya kwendalo, ekuhambeni kwexesha akusayi kuphinda utye ukutya okuneswekile okanye amanqatha amaninzi kwaye uyakubona indlela oziva ngcono ngayo. Ukutya okufanelekileyo kusinceda ukuba sibe nokuhamba kakuhle kwamathumbu, impilo-ntle kunye nokwetyisa okuhle.
Yenza imidlalo yonke imihla
Mhlawumbi ungaziva ngathi wenza umdlalo onzulu yonke imihla, kodwa ungazilolonga kwaye uhambe yonke imihla. Kubalulekile ukuba wenze umthambo nokuba uza kuhamba ngesantya esihle, wenze imithambo ukolula okanye ukomeleza. Okona kubalulekileyo kukungahlali imini yonke okanye ungenzi nto, kuba nezimbo zomzimba ezincinci zibala ekugqibeleni kwaye zisinceda sibe sempilweni. Zama ukufumana into oyithandayo, yenza imidlalo eyahlukeneyo kwaye uyonwabele.
Nangona kuyinyani ukuba sonke siyazithanda iziselo ezineswekile okanye kwanazo ziqulathe utywala, inyani kukuba eyona nto isempilweni sinokuyisela ngamanzi. Ukusela amanzi yonke imihla kubaluleke kakhulu Ewe, umzimba wethu uyayidinga. Unokwenza i-infusions ngaphandle kokongeza iswekile, njengoko nayo isempilweni, okanye yongeza i-wedge yelamuni emanzini. Konke oku kunceda ukuba usele ngakumbi kwaye unike incasa.
Kuluntu lwanamhlanje le nto inzima kakhulu, kodwa kunyanzelekile ukuba wehlise amanqanaba oxinzelelo olungenamveliso esinalo okanye sinokugula. Inkqubo ye- Uxinzelelo ngumthombo weengxaki kwaye ke kufuneka sifunde ukuyilawula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Izinto ezi-5 ekufuneka uzenze yonke imihla ukuze ube sempilweni
Kufuneka wenze ntoni xa isibini sikude